Araka ny filazan'i Jony Ive, ny Apple Watch dia tsy famantaranandro | Avy amin'ny mac aho
Hatramin'ny taranaka voalohany an'ny Apple Watch, izay nantsoina taloha hoe iWatch, raha ny vaovao tokana momba ity fitaovana ity dia honohono, ny Apple smart watch dia nanampy asa maro be, maha-taranaka fahefatra ny maodely izay nivoatra indrindra momba ny fifaninanana.
Na dia marina aza fa ny taranaka voalohany an'ny Apple Watch dia namela anay hifandray tamin'ny fampandrenesana ankoatra ny fitantanana ny fampiharana hafahafa, vao tamin'ny taranaka faharoa, miaraka amin'ny andiany 2 (ankoatry ny andiany 1) rehefa nanomboka ho tsara dia tsara ny fampiharana ankoatra ny fampidirana chip GPS.
Miaraka amin'ny Series 3, Apple dia nandefa kinova miaraka amina fifandraisana LTE ankoatran'ny manampy altimeter ary miaraka amin'ny Series 4, ny orinasa monina ao amin'ny Cupertino dia nanampy electrocardiogram, asa iray izay tsy misy afa-tsy any Etazonia sy amin'ny Apple Watch izao. . tsy misy maodely mifaninana hafa manolotra an'io endri-javatra io.
Mahita ny fivoaran'ny Apple Watch, nsa sarotra ve ny mieritreritra fa ny Apple Watch dia tsy tena famantaranandro, fa nanjary fitaovana iray mihoatra ny fanolorana fotoana ho antsika. Raha nanana fisalasalana momba an'io izahay, ny talen'ny manamboninahitra Apple, Jony Ive dia nanamafy izany tamin'ny resadresaka nifanaovana taminy Financial Times.
Rehefa nanontaniana aho raha famantaranandro fotsiny ny Apple Watch dia nilaza i Ive:
Tsia, mieritreritra aho fa solosaina matanjaka be ity, miaraka amina sensor izay be pitsiny indrindra, izay mifatotra amin'ny hatoloko. Sady tsy misy famaritana no tena ilaina.
Izaho sy ianao dia mizara fomba fijery mitovy ary nanana fanamby mitovy amin'ny vokatra antsoinay hoe iPhone izahay. Mazava fa ny fahaizan'ny iPhone dia mihoatra lavitra noho ny asan'ny antsointsika hoe telefaona mahazatra.
Mikasika ny fianarany dia iray amin'ireo farany nifindra tany Apple Park, nilaza aho fa:
Tsy tara izany, voalamina sahala amin'ny famindrana olona mihoatra ny 9.000, tsy vita ao anatin'ny iray andro. Iray amin'ireo vondrona farany izahay. Hetsika feno fientanam-po io satria midika hoe miala studio izay efa am-polony taona no namolavolana sy nananganana ireo prototypes voalohany. Ity ilay studio niverenako tamin'ny andro nahafatesan'i Steve. Ary io no toerana nahitantsika ny iPhone sy iPod.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Araka ny voalazan'i Jony Ive, ny Apple Watch dia tsy famantaranandro
SimCity: Fanontana feno, amidy mandritra ny fotoana voafetra